Sunny Leone Oo 5 INCHES Ka Gaaban Deepika Padukone – Ogoow Dhirirka Rasmiga Ah Ee Atariishooyinka Bollywood - Hablaha Media Network
Sunny Leone Oo 5 INCHES Ka Gaaban Deepika Padukone – Ogoow Dhirirka Rasmiga Ah Ee Atariishooyinka Bollywood
HMN:- Marka laga tago tayada iyo sheenaha, xiddigaha Bollywood ayaa waxaa lagu yaqaanaa inay jirkooda dhistaan sidoo kalena ay leeyihiin muuqaal aad usoo jiidasho badan.
Marka si gaar ah looga hadlo atariishooyinka, waxay ku dadaalaan inay markasta yeeshaan muuqaalka ugu wanaagsan, balse maanta waxaan maqaalkaan idinkugu soo gudbin doonaa xaqiiqooyin aadan ogeyn oo ku saabsan atariishooyinka caanka ah ee Bollywood iyo dhirir ahaan ama joog ahaan inta ay jeedaan.
Waxaana xaqiiqooyinka la yaabka leh ka mid ah in atariishada caalamiga ah ee reer India Deepika Padukone ay 3 inches ka dheer tahay Salman Khan, xaqiiqadaani malaha waxay xiiso u yeeli doontaa wararka xanta ah ee sheegaya inay dhawaan labadoodu filim isla sameyn doonaan.
Sababtoo ah waxaad isweydiineysaa sida ay labadoodu u muuqan karaan wadajir ahaan marka la fiirsho joog ahaan farqiga u dhexeeya. Intaas oo keliya ma ahan, Deepika ayaa 5 inches ka dheer atariishada soo jiidashada badan Sunny Leone.
Xaqiiqooyinka sidoo kale xiisaha leh waxaa ka mid ah in Katrina Kaif ay ka dheer tahay Aamir Khan oo ay kala shaqeysay filimkii Dhoom 3 kaasoo noqday blockbuster guuleystay.
Sawirradaan hoose ayaan idinkugu soo bandhigi doonaa liiska atariishooyinka Bollywood iyo dhirir ahaan jooggooda. Faahfaahintu waxay ku dhex qoran tahay sawirka atariisho kasta.